तालिबानमाथि फेसबुक र युट्युबको प्रतिब न्ध, ट्वीटरले के गर्ला ? – Purba Aawaj
तालिबानमाथि फेसबुक र युट्युबको प्रतिब न्ध, ट्वीटरले के गर्ला ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ०२, २०७८ समय: १३:३५:५९
दई दशकपछि इस्लामिक कट्टरपन्थी तालिबान अफगानिस्तानमा पुनः सत्तामा आएसँगै सोसल मिडिया कम्पनीहरुमाथि पनि स्वयं तालिबान तथा सम्बन्धित सामग्रीहरुमाथि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने दबा`ब बढिरहेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो सोसल मिडिया प्लाटर्फम फेसबुक र भिडियो स्ट्रिमिंग प्लाटर्फम युट्युबले चाहिं तालिबानमाथिको प्रतिब`न्धलाई कायमै राख्ने भएका छन् ।
फेसबुकका अनुसार ख`तरनाक व्यक्ति तथा संगठनप्रतिको नीतिअन्तर्गत तालिबान लामो समयदेखि फेसबुकमा प्रतिब`न्धित रहेको छ ।
तालिबानको प्रसं`सा गरिएका सामग्रीहरुमाथि स`क्रि`यरुपमा प्रतिब`न्ध लगाइनुका साथै अवस्थाको अनु`ग`मनका लागि अफगान विज्ञहरुको टिम खटाइएको फेसबुकका प्रवक्ताले जनाएका छन् ।
तालिबानलाई फेसबुकका सेवाहरुबाट बञ्चि`त गरिनुका साथै तालिबानसँग सम्बन्धित सबै अका`उन्ट डि`लिट गरिने छ । साथै तालिबानको समर्थनमा पोस्ट गर्नेहरुका फेसबुक अकाउन्टमाथि पनि प्र,ति`न्ध लगाइनेछ ।
फेसबुकसँग दा`री र पा`स्तोभा`षाका विज्ञहरुको एक समूह रहेको र त्यसले अफगानिस्तानको स्था`नीय सामग्रीहरुमाथि निरन्तर नि`ग`रानी गर्दै सूचि`त गरिरहेको पनि फेसबुकको भनाइ छ ।
फेसबुकका अनुसार पछिल्लो केही वर्षदेखि तालिबानका कतिपय नेताहरुका साथै प्रव´क्ता समेत फेसबुक प्रयोग गर्दै आएका छन् र उनीहरुका लाखौँको संख्यामा फलो`अ´र्स छ । तथापि अब तालिबानसँग सम्बन्धित सबैको फेसबुकमा प्र`तिब`न्ध लगाइनेछ । फेसबुक मात्र नभइ फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपमा पनि तालिबानलाई प्रतिब`न्ध लगाइएको फेसबुकले जनाएको छ ।
उता यसअघि अमेरिकी सरकारको विदेशी आ`तं`क`कारी संगठनको परिभाषाका आधारमा तालिबानमाथिको प्रतिब`न्धको निर्णय गर्ने निर्णय गरेको युट्युबले अन्ततः तालिबानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो नीतिलाई कायमै राख्ने भएको छ ।
युट्युब प्रव`क्ताका अनुसार तालिबानद्वारा सञ्चालित तथा स्वामित्व राखिएको वि`श्वा`स गरिएका सबै युट्युब अका`उन्ट निस्तेज बनाइनेछ । यो कार्य कम्पनीको लामो समयदेखिकै नीति रहेको उनले बताए ।
उता तालिबान प्रवक्ताले भने आफ्नो दशौँ लाख फलोअर्स भएको ट्वीटर अकाउन्टको प्रयोग गरी नयाँ नयाँ सूचना तथा समाचारहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका रोयटर्सले जनाएको छ । यस विषयमा जिज्ञा`सा राख्दा ट्वीटरका अधिकारीले हिंश्रक संगठनहरु वि`रुद्ध आफ्नो नीति कायमै रहेको बताए पनि तालिबानप्रति कस्तो नीति अ`ख्ति`यार गर्ने भन्ने बारेमा केही खुलाएनन् ।
ट्वीटरको उच्च प्राथमिकता भनेको मानिसहरुलाई सुरक्षित राख्नु हो र हामीहरु सत`र्क छौँ । हामी हाम्रा नियमहरु कार्यान्वयनका लागि सक्रिय रुपमा लागिरहन्छौँ र ट्वीटरको नीति उल्लंघन गर्नसक्ने सामग्रीहरु खासगरी हिंसालाई बढा`वा पब`र्द्ध`न गर्ने, प्लाटर्फमको दु`रुप`योग गर्ने तथा स्पामहरुको समीक्षा गर्दछौँ । एजेन्सीको सहयोगमा
Last Updated on: August 18th, 2021 at 1:45 pm